15 carruur ah oo shuban ugu dhimatay Ceelbarde
15 carruur ah oo shuban ugu dhimatay Ceelbarde
Radio Ergo 02 February, 2016 BAKOOL
(ERGO) - Cudurka shubanka oo labadii bil ee la soo dhaafay ka jiray degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool ayaa lagu soo warramayaa inay u dhinteen 15 carruur ah.
Xarun ka shaqeysa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ayaa waxaa shubanka u jiifa 9 carruur ah. Maamulka ayaa sheegay in aysan xarunta isku mar seexan karin tiro intaas ka badan. Balse waxaa jira bukaanno dawooyinka ka qaata maalin kasta kaddibna guryahooda lagu celiyo. Xaruntaas ayaa labadii bil ee la soo dhaafay qaabbishay 270 qof oo u badan carruur.
Hoos ka dhageyso warbixintan faahfaahsan oo uu Baydhabo nooga soo diray weriyaha Ergo ee Muxyadiin Xusni.